Qiimeyn mid mid loogu sameeyey Cayaartoyda Manchester United iyo fadeexad soo baxday | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Qiimeyn mid mid loogu sameeyey Cayaartoyda Manchester United iyo fadeexad soo baxday
(24-11-2018) Qiimayn lagu sameeyay ciyaartoyda Manchester United ayaa muujinaysa sida ayna xili ciyaareedkan ugu jirin xaaladii ay ka doonayeen jamaahiirta kooxdooda Red Devils waxayna qiimayntani ceebi ka raacday ciyaartoy badan oo uu Mourinho ka waayay qaab ciyaareedkii uu ka doonayay.
Haddaba Shabakada qalinkacayaaraha ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa qiimaynta adag ee uu wargayska Evening News ka sameeyay bandhigii ciyaartoy kasta oo Man United ah ee xili ciyaareedkan iyada oo waliba ay muujiyeen sida ay laba xidig lama filaan u noqdeen kuwa ugu fiican Red Devils.
Qiimaynta Ciyaartoyda Man United Ee Wargayska Evening News
Aan ku bilawnee wargayska Evening News ayaa qiimayntii ugu xumayd oo min 1 darajo oo kaliya ah siiyay ciyaartoyda kala ah Antonio Valencia, Scott McTominay, Sergio Romero, Matteo Darmian, Phil Jones iyo Scott McTominay.
Waxa kale oo qiimayn aad u liidata oo min 2 darajo oo kaliya ah la siiyay Alexis Sanchez, Namanja Matic, Eric Bailly iyo Andreas Pereira waxayna halkii laga doonayay 10/10 ay ka heleen min 2/10 taas oo lagu muujiyay xaalada xun ee ay xili ciyaareedkan ku soo jireen.
Sidoo kale waxaa qiimayn aad u liidata helay saxiixa cusub ee Fred, Romelu Lukaku iyo Jesse Lingard halka ay sidoo kale jiraan xidigo aan badan oo qiimayn hoose helay.
Laakiin Anthonay Martial ayaa noqday xidiga xili ciyaareedkan ugu fiican Manchester United ee qiimaynta ugu saraysa oo 8 darajo ah ka helay qiimaynta guud ee wargayska Evening News wuxuuna Martial helay qiimayn dhan 8/10 isaga oo laba darajo oo kaliya ka hooseeya intii ugu saraysay ee la doonayay.
Waxa kale oo qiimayn heer fiican ah helay Luka Shaw oo noqday xidiga labaad ee Man United ugu fiican xili ciyaareedkan, waxaana ku soo xiga David De Gea, Ashley Young iyo Victor Lindelof oo qiimayn meel dhexaad ah helay.
Haddaba halkan si buuxda ugaga Bogo Qiimaynta Wargayska Evening News uu ku sameeyay guud ahaan ciyaartoyda Man United.
Sergio Romero – 1/10
Lee Grant – 5/10
Antonio Valencia – 1/10
Matteo Darmian – 1/10
Marcos Rojo – N/A (Muu Ciyaarin)
Phil Jones – 1/10
Qiimaynta Khadka Dhexe
Nemanja Matic – 2/10
Andreas Pereira – 2/10
Haddaba akhriste, haddii aad ka mid tahay taageerayasha Man United, sideed u aragtaa qiimaynta wargayska Evening News uu ku sameeyay ciyaartoyda Red Devils? Miyay jiraan ciyaartoy aad filayso in ay ka hooseeyaan heerkii bandhigoodu ahaa?.